तन्नेरी चासो – Tanneri Chaso
HomeTag: तन्नेरी चासो
Tag: तन्नेरी चासो
बढेको सांसदको पारिश्रमिक र सुविधाप्रति नदेखिएका यी पाटा ! (तन्नेरीको चश्माबाट हेर्दा)
Tanneri Chaso	November 21, 2016
अहिले संचारमाध्यम, सामाजिक संजाल र नागरिक समाजलाई एउटा समाचारले निकै तताएको छ । त्यो हो सांसदको पारिश्रमिक र सुविधा बढेको समाचार । यसलाई कसैले सकारात्मक रुपमा लिए भने कसैले नकारात्मक आलोचना पनि गरे । हामीले भने यो विषयलाई तन्नेरीको…
सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा किन यस्तो सास्ती ?
Tanneri Chaso	July 29, 2015
-दीपज्योति श्रेष्ठ, काठमाडौँ
सरकारले नीतिगत रुपमा जेष्ठ नागरिकलाई वृद्दभत्ता दिएर सम्मान त गर्यो तर यो सेवा सुविधालाई प्राप्त गर्नको लागि भने किन यति धेरै कठिन भईरहेको छ ? नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरिएको राज्यको सम्मानमा पाएको सेवा-सुविधा लिन पनि यति धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको कुरा सरकारलाई अवगत छ कि छैन थाहा भएन तर जेष्ठ नागरिकहरुलाई आफ्नो सेवा लिन भएको यो सकस देख्दा लाग्छ नीति बनाउनु ठूलो कुरा होइन त्यसको व्यवहारमा कति लागु भईरहेको छ, लक्षित समुदायले सेवा सुविधा पाईरहेको छ कि छैन त्यो हेर्ने काम पनि नीतिनिर्माताहरुको हो ।